Hankalaza ny faha 15 taonany ny ESSVa ao Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
L e Gouvernement Ntsay démissionne il y a 10 heures
Les Super Eagles volent plus haut que les Aigles de Carthage il y a 13 heures
La revanche de Christine Razanamahasoa il y a 16 heures
L’application des Jeux disponible gratuitement il y a 2 jours
Les Barea en communion avec le peuple il y a 3 jours
Les problèmes de la pollution et son impact sur les enfants au cœur des débats il y a 3 jours
Retrouvailles des favoris pour la grande finale il y a 4 jours
Merci Barea de nous réveiller il y a 4 jours
Nohamafisina fa laharam-pahamehana ny fiahiana ara-tsosialin’ny mpiasa il y a 4 jours
Hankalaza ny faha 15 taonany ny ESSVa ao Antsirabe
R.Hajatiana Léonard﻿ il y a 4 années
Dimy ambiny folo taona ankehitriny ny Sekoly, efa an'arivony maro ny mpianatra novolavolainy ara-pahaizana fa indrindra ny ara-panahy.
Ho feno dimy ambiny folo taona katroka ny Sekoly Ambony ESSVa Antsirabe ny 11 aprily ho avy izao. Vita tamin’ny Asabotsy lasa teo avokoa ny famaranana ny fifaninanana dihy sy hira, ka afaka rahampitso ao anatin’ny fankalazana ny tsingerintaona no hanolorana ny loka ho an’ireo nandresy tamin’izany.
Ny asabotsy 11 aprily 2015 ho avy izao ny Sekoly Ambony ESSVa no hankalaza amin’ny fomba ôfisialy ny faha dimy ambiny folo taonany, izay atao ao amin’ny tokontany malalakin’ny sekoly. Hanomboka amin’ny sivy ora sy sasany ny lanonam-panokafana izany andro malaza ho an’i ESSVa. Raha ny fanazavana nomen’ny vondron’ny rectorat, dia napetraka manokana eo ambany fiahian’ny Minisitrin’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika izao fety izao, ary olona maro manam-pahefana sy olon-tsotra ihany koa no nasaina ho tonga hanotrona. Amin’ny maha sekolim-pinoana katolika azy, dia ny lamesa no hisantatra ny fandaharam-potoana ka hitohy amina fanomezana loka an’ireo nandresy tamin’ny fifaninana sy ny fanolorana mari-boninahitra sy mari-pakasitrahana ireo mpiasa ao amin’ny Sekoly. Raha tsiahivana, ny ESSVa no fianarana ambony an’i diosezy katolika Antsirabe. Tompon’antoka tamin’ny fanorenana azy ity ny raiamandreny Eveka Félix RAMANANARIVO sy i José RIBEAUD, fototra nitsirian’ny “Fondation Avenir Madagascar” (FAM).
Dimy ambiny folo taona ankehitriny ny Sekoly, efa an'arivony maro ny mpianatra novolavolainy ara-pahaizana, fa indrindra ny ara-panahy. Mbola tsy mitsahatra mamolaka mpianatra mpiofana mba ho tonga olombanona sy olomanga ho an’ny firenena araka ny nambaran’ny pretra Edmond RAKOTONDRAMANANA mpitarika lehibe ao amin’ny Sekoly. “Fety roa sosona ny amin’io”, hoy ihany izy satria sady fotoana hiarahany mifaly amin’ny mpianatra sy ny mpiara-miasa ao amin’ny ESSVa ihany koa io andro amin’ny maha rektora vaovao azy. Tsy mikely soroka tokoa ny tompon’andraikitra amin’ny fampitaovana mba hanomanana ity fety ity, ka omaly no najoro ny haino aman-jerin’ny Sekoly ESSVa, ka ny radio no efa mandeha amin’izao fotoana izao, fa ny televiziona kosa mandritra io fankalazana amin’ny asabotsy io no hiparitaka mivantana amin’ny interinety.
Omena sehatra ny mpianatra
Tao amin’ny efi-trano malalaka fiasàn’ny sampam-piofanana “Electro-Mécanique ESSVa” no nanaovana ny fifanintsanana farany teo amin’ny samy mpianatra, izay nanehoan’izy ireo ny talenta amin’ny hira sy ny dihy. Somary taraiky ihany ny fanombohana noho ny olana ara-teknika, ka efa tamin’ny telo ora tolakandro vao nanomboka ny lanonana. I Angelo, mpianatra ao amin’ny serasera sy ny fanaovan-gazety taona voalohany avy hatrany no nanomboka izany tamin’ny hira, gadona “Reggae”. Nananosarotra ny fitsarana satria vahiny no nitsara ny lalao, ka nifanohatra tamin’ny fahitan’ny mpijery ny vokatra nomeny. Ny lalam-piofanana serasera avokoa no nitàna ny voalohany-daharana, na tamin’ny hira izany, na tamin’ny dihy. “Ny fandraisana anjara sy ny fanehoan-talenta no zava-dehibe”, hoy ny fanazavan’ireto ekipa nihintsana tamin’ny famaranana ireto. Homena laka ny mpianatra amin’io lanonana io, ka afaka manao fampirantiana ny zava-bitany avokoa izy ireo ny asabotsy tontolo andro, araka ny fiofanana arahany avy. Izany rahateo hoy ireo mpanabe-mpampianatra no maha fiofanana ara-kasa ny ao amin’ity Sekoly ity, ka noho izany dia amporisihana izy ireo hahavita zavatra mivaingana sy hanao fampiharana ny azo rehetra tany am-pianarana. Araka ny teny manentana nosafidian’ny ESSVa hatrizay manko, hoe “Foi et Excellence”, dia ny asa atao am-pitiavana sy am-pitokiana an’Andriamanitra no ahazoana ny fahalavorariana. Ka ho tratry ny taona mitsingeringerina indray ny ESSVa e! Ho lovain’ny taranaka mifandimby sy ho reharehan’i Vakinankaratra.
Projet ERASMUS+ BUILDING BRIDGES : Un an après, les ponts sont en place - il y a 7 jours
Sekoly katolika : Diplaoma katolika: CEPE, BEPC, Bacc, manomboka amin’ity taona ity - il y a 3 mois